मनसुन शुरुः देशभर फैलिन केही दिन लाग्ने ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार मनसुन शुरुः देशभर फैलिन केही दिन लाग्ने !
on: ५ असार २०७६, बिहीबार १६:३० In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । नेपालमा आजदेखि मनसुन शुरु भएको छ । मुलुकको पूर्वी भागबाट शुरु भएको मनसुन देशभर फैलिन अझै केही समय लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
सामान्यतया सरदर वर्षा भन्नाले स्थानविशेषको लामो समय (करीब ३० वर्ष) को औसत वर्षालाई बुझिन्छ । सरदर वर्षाको ९० देखि ११० प्रतिशतसम्म वर्षालाई सामान्य वर्षा मानिन्छ भने सोभन्दा कम र बढी वर्षा भएमा क्रमशः न्यून वा अधिकतम वर्षा भएको मानिन्छ ।
५ असार २०७६, बिहीबार १६:३०